एमालेसँग आत्मसमर्पण नगर्न प्रचण्डलाई दबाव, एकता टरे के होला ?
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो समयदेखि जारी एकता प्रक्रियामा केही समयदेखि आइसब्रेक लागेको छ । नेताहरुले ‘एकता’ को रटान लगाउन नछाडे पनि ठोस प्रगति हात लाग्न सकेको छैन ।
वैशाख ९ मै एकता हुने भनेर गरिएको प्रचार वैशाखको अन्त्यतिर आइपुग्दा थप जटिल बनेको छ । दुई अध्यक्ष छलफलमा बस्ने तर गाँठा यथावत रहने सिलसिला यथावत छ । दुई पार्टीका नेताहरुको बोलीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने परेका गाँठा सहजै फुक्नेवाला छैनन् ।
एमाले माओवादी एकता टरेको खण्डमा आइपर्ने सकसबारे चर्चा गर्नुअघि दुई दलमा देखिएका समस्याबारे चर्चा गरौं ।
जारी एकता प्रक्रियामा गत्यावरोध उत्पन्न हुनुका कारणबारे अनेकथरी तर्कनाहरु बाहिरिएका छन् । बाहिर जेजस्ता विश्लेषण लडाइएको भए पनि उल्झनको चुरो लेन–देन नै हो । खासमा एमाले त्यसमा पनि ओली आफूलाई ‘दाता’का रुपमा पेश गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड ओलीको चुलिँदो महत्त्वकांक्षालाई बल पुग्नेगरी आफूलाई ‘लिने’ व्यक्तिका रुपमा सीमित गरिरहेका छन् । प्रचण्ड बढी हत्याएर पार्टीलाई विलय गराउन जति उद्यत छन्, ओली उति नै मुठी कसेर माओवादीलाई साइजमा राख्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिएका छन् । बाहिर जेजस्ता हल्ला चलाइएका भए पनि एकताको हलो अड्कनुको चुरो यही हो ।
माओवादीका एकथरि नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी एकताबाट पछि फर्कन नहुने पक्षमा छन् । एकताबाट फर्कंदा जनतामाथि गरिएको वाचामा कुठाराघात हुने र यसको मूल्य आसन्न चुनावमा झेल्नुपर्ने यो पक्षको विश्लेषण छ । स्वयं प्रचण्ड पनि एकताबाट पछि हट्दा सीपी मैनालीको हविगतमा पुगिने हो कि पत्र त्रासमा छन् ।
तर पछिल्लो समय माओवादीमा आत्मसमर्पण गरेर एमालेसँग एकता गर्न नहुने अर्को ध्रुव ‘लाउड’ बन्दै जान थालेको छ । स्रोतका अनुसार, एमालेको पेलान र पार्टीभित्रको एउटा समूहको आत्मसमर्पण गरेर एकता नगर्न आइरहेको सुझावले प्रचण्ड अलमलमा परेका छन् । ‘एमालेले निर्चोने र पार्टीभित्रकाले त्यसरी एकता गर्न नहुने सुझाव दिएपछि प्रचण्ड दोहोरो दबावमा पर्न थालेका छन्’, माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘बरु एकताबाट पछि हटेर अर्को समीकरण बनाउन प्रचण्डलाई सुझाइरहेका छन् ।’
एमाले–माओवादी एकता टरेमा सबैभन्दा पहिलो असर राजनीतिक समीकरणमा पर्नेछ । एकता टर्दा दूरी बढ्ने र त्यो समीकरण भत्कने तहसम्म पुग्न सक्छ । विगतको विश्लेषण गर्दा यो नहोला भन्न सकिन्न । कथंकदाचित यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा पाँच वषको स्थायी सरकार अल्पायुमै ढल्नेछ र उही पुरानो अस्थिर सरकार निर्माणको सिलसिलाले निरन्तरता पाउनेछ । एमाले माओवादी एकता बिग्रियोस् भनेर धुप हालेर बसेकाहरु त्यस्तो परिस्थितिमा दुई मध्ये एक शक्तिलाई छाँद हालेर अघि बढे भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
स्थिरताको सपनामा तुषारापात
एकताबाट एमाले–माओवादी पछि हटे के होला ? धेरैले राखिरहेको जिज्ञासा हो, यो । यो प्रक्रिया तुहिएमा हुने सबैभन्दा ठूलो क्षति जनताको सपनामा नै पर्नेछ ।
अस्थिर सरकारबाट आजित जनताको चाहना देशले स्थिर सरकार पाओस् भन्ने नै थियो । यही चाहना जनताले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनबाट व्यक्त गरेका थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धन एक हुँदा देशले पहिलोपटक बलियो सरकार पाएको छ । यसले रेलमार्गलगायतका विकासको सपनामा तुषारापत गर्नेछ ।
वाम आन्दोलनमै धक्का
एमाले माओवादी मिल्दा देशको ठूलो समूह खुसी छ । कांग्रेसबाट आजित जनताले वाम पार्टीले देशलाई निकास दिने झिनो आश पालेका छन् । दुई पार्टी एकता प्रक्रियाबाट व्याक भएको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो धक्का वाम आन्दोलनमा नै लाग्नेछ । कम्युनिस्टहरु छिन्न भिन्न हुने र जनताले पुनः कांग्रेस नै रोज्न सक्नेछन् । यो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि भने पनि एमाले–माओवादी एकता गर्नुपर्ने दबावमा छन् ।